Mawiricheya Zviwanikwa - Iwo Akaremara Kufamba Nhungamiro Karman® Mawiricheya
Vafambi kutenderera pasirese vanosangana nematambudziko akati wandei anobatsira vatungamiriri. Iyo hukuru hukuru hwevatungamiriri kunze uko inoenda kuratidza kuti mangani sarudzo dziripo kugadzirwa kana uchifamba. Mimwe mirayiridzo inoongorora nzira dzakasiyana dze kutakura, nzvimbo dzehotera, kureba kwekugara. Vamwe vanobata nzvimbo nenzvimbo dzekuona nzvimbo. Aya angori mashoma easarudzo dzakasiyana vafambi vanosangana nawo. Zvisinei, remara vanhu vane izvo zvisarudzo zvakapfuura zvekuita uye nezvimwe! Kune avo vari mapofu, matsi uye wiricheya zvakasungwa kune mamwe matambudziko ekugadzirisa kana uchironga rwendo. Apa ndipo panotungamira magwara. Kune huwandu hukuru hwemagwara anotarisana nenyaya dzakasiyana siyana kubva kumagetsi ekubatsira kuenda kunzvimbo dzekunze. Kubatsira iyo remara nakidzwa neruzivo rwekufamba, takaunganidza muunganidzwa wezve zviwanikwa. Aya mawebhusaiti uye magwara anogona kubatsira kune avo vakaremara. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kushanyira nzvimbo idzi uye tinovimba unonakidzwa neruzivo rwako rwekufamba. Mapofu Ekufamba Zviwanikwa
ZveMagetsi Kufamba Yekubatsira Kune Mapofu Vanhu - ruzivo uye zviwanikwa zvekufambisa zvekubatsira kune mapofu vanhu.
BlindAid - inodzidzisa chinyorwa chinotsanangudza ruzivo nezve mafambiro ekubatsira mapofu.
Travel Resources - ruzivo runobatsira kubva kuAmerican Council of the Blind.
Kufamba Kwenyika Dzese Kwemapofu - hurukuro yezvipingamupinyi zviri kusangana nevafambi vasingaone kana kuona.
Matsi Kufamba Zviwanikwa
Matsi Yekufamba Ruzivo - inodzidzisa sosi pamisoro yekukosha kune vafambi matsi.
Kutakura uye Kufamba - ruzivo runobatsira pakufamba uye kutakura nyaya kune vafambi matsi.
Kufamba Matsi - sosi inokurukura yakaburitswa yevanonzwa vasingafambi vafambi.
Matsi Zviwanikwa - kuunganidzwa kwezviwanikwa kune vafambi matsi.
Kufamba Mazano - ruzivo uye mazano pamusoro pekufamba kwevanhu matsi.
hwiricheya Travel Zviwanikwa
Kuzorora - ruzivo runobatsira pakurongwa kwekufamba kwevanhu vari mu Chichemo chemaoko.
remara Kufamba - sosi inobatsira inoitirwa iyo remara mufambi.
Kuremara Kufamba - kuremara zvekufambisa uye zvekuvaraidza zviwanikwa zvinokurukurwa.
Travel Resources - ruzivo rwekufamba kwevanhu vakaremara.
Wiricheya Mhepo Kufamba - webhusaiti inobatsira inopa ruzivo kune vafambi vemhepo ne mavhiripu.
Kufamba Kunowanikwa Zviwanikwa
Kuwana Kwevanhu Vakaremara - ruzivo rwakakosha pamusoro pekuwanika kwe remara vafambi.
Kuremara Kuwana - webhusaiti ine ruzivo rwekupinda vakaremara vafambi.
Vakaremara Zviwanikwa - ruzivo rwekufambisa zviwanikwa zveiyo remara.
Akaremara Kufamba - ruzivo runobatsira paUS based remara ruzivo rwekufamba.
Zvinyorwa zveVakaremara Vafambi - ruzivo uye zviwanikwa pa remara vafambi.
vakaremara Travel Zviwanikwa
Disability Resources - ruzivo uye zviwanikwa pa remara kufamba.
Disability Resources - mareferenzi nezvehurema uye kufamba.
Vafambi vane Mamiriro Ekurapa - chinyorwa chinodzidzisa chinokurukura vakaremara vafambi vane mamiriro ekurapa.
Ruzivo rwehurema - kuunganidzwa kweruzivo uye zviwanikwa pa remara.
Kana iwe ukaona ichi chinyorwa chichibatsira, ndapota sununguka unzwe kuti ubatanidze kana kuishandisa zvakare. Zvese zvatinokumbira ndeyekuti chikwereti chidzokere kune yedu saiti.Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri ne 1800wiricheya; tinopa kutakura zvigaro, magetsi maguru,mobility scooters, & vanofamba.